Smatch Z yakasimba kwazvo inotakurika koni | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Kugoverwa, GNU/Linux, Linux Mitambo, chiutsi
Smatch Z yakasimba inotakurika koni Mune yakachena maitiro eSony PSP. Asi kunyangwe iko kutakurika uye saizi diki, inoviga simba rakawanda, uye unogona kuona kuti iyo GTA V vhidhiyo mutambo inomhanya isingasviki makumi matanhatu fps. Ichaburitswa munaKurume 60 uye ichivimbisa kuve yakasimba kwazvo inotakurika munhoroondo inokwanisa kumhanya PC vhidhiyo mitambo, ndosaka ichiita senge yakatemerwa kubudirira uye ine vakawanda vakaifarira.
Mitambo yemavhidhiyo inomhanya ihwohwo hwakajeka mhando pane pakombuta yako kana palaptop komputa uye neyakafanana furu, vimbiso huru. Uye izvi zvese ndezvekutenda kune Hardware yayo ine yakadzamidzirwa AMD Ryzen V1650B microprocessor uye chip chip kana Radeon Vega 8 GPU kubva kukambani imwe chete, iyo inopa zvisingaenzaniswi kuita. Zvese izvi zvichiperekedzwa neayo 1080-inch 6p yekubata skrini uye yakagadzikana kudzora kwekugona kwayo.
Iyo yakajairwa RAM ndangariro iyo ichave ichave ichave 4GB DDR4 pa2133Mhz, uye 64 GB yekuchengetera mune SSD iyo inosanganisira, inowedzerwa kuburikidza nemakadhi eSD. Kunyangwe mune yayo Pro vhezheni ichauya nekaviri RAM uye yakapetwa iyo SSD kugona. Mhando mbiri idzi dzichava ne5MP kamera, uye neWiFi yekubatanidza, Bluetooth 4.0, USB TYPE C, uye DisplayPort. Uye kana iwe uchifarira mutengo, taura kuti yakajairika vhezheni yacho inodhura nezve $ 699 uye iyo Pro inosvika $ 899. Mune maonero angu zvakadhura ... kune mudziyo unokwana muchanza cheruoko rwako. Kunyangwe uchiona mutengo weiyo iPhone kana Galaxy S, haina kupenga kudaro.
Izvo zvinoenderana nesisitimu yekushandisa iyo yavakazvigadzirira, SMACH OS neLinux kernel, kusanganisa iyo Steam system yemavhidhiyo magama hongu. Iyo zvakare ine Windows 10 Kumba inoshanda sisitimu yekuenderana kukuru kweanopfuura makumi maviri emakumi mazita aripo muValve Steam chitoro chauchazowana. Mazita anozivikanwa seGTA V kana Chikwata cheLegens chaunogona kuona muHD uye nekumhanya kwe20.000 FPS, uye mamwe akaita saThe Witcher 60, Final Fantasy XV, Monster HUnter World, Starcraft III, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Smatch Z yakasimba kwazvo inotakurika koni
Maitiro ekuwana technical technical yemahara uye yakavhurika sosi software
Nintendo Chinja inova piritsi reLinux nekuda kweFail0verflow